Forex Trading Calculators | Margin, Pip, Pivot uye Position Calculator
musha / Trading / Forex Tools / Forex Calculators
Isu takagadzira hutano hwakasiyana-siyana hwekuverenga hunobatsira vatengesi vedu kuita. Chimwe nechimwe chave chakanyatsogadziridzwa nevatengesi zvavanoda pakatarisana nechinangwa chekufambira mberi. Mukati pekuunganidzwa iyi:: chimiro chekusimudza chekusimudza, margin calculator, pips calculator, pivot calculator uye mari yekugadzirisa. Zvinotarisirwa kuti vatengesi vanozvidzidzira nevakawanda vavo vanoverenga, sezvo vanogona kubatsira kukura kweurongwa hwekutengeserana uye urongwa, nechinjodzi uye kutarisana mberi kwechirongwa ichocho. Izvi zvinogona kubatsirawo vatengesi kuti vadzivise zvikanganiso zvakakosha, semuenzaniso; kushandura maonero ekusimudzira huwandu hwemadhora imwe chete kunogona kuwedzera njodzi kuburikidza nebhizimisi zvakanyanya.
Chimwe chinhu chinokosha chekutonga mararamiro ako pamakwenzi chero ipi zvayo inoshandiswa, chinhu ichi chinokubvumira kunyatsoverenga mazamu aunoda kuitira kuti uise bhizimusi mumusika.
muenzaniso: kana iwe uchida kutengesa mari yechikwata che EUR / USD, pamutengo wakatorwa we1.04275, pakushambadzira kweiyo 10,000 *, uchishandisa mukana we 1: 200 iwe uchada kuva ne $ 52.14 madhora mubhengi rako kuti uvhare iyo exposure.
* imwe mujenya yakaenzana neyunhengo dze100,000.
Iri shandura iri nyore richabatsira vatengesi, zvikurukuru vatengesi vevatengesi, mukuverenga mabhuku avo pabasa.
muenzaniso: Tichashandisa EUR / USD muenzaniso zvakare; kana iwe uchida kutengeserana mari huru yechikwata EUR / USD, pamutengo wakambotaurwa we1.04275, pakushambadzira kweiyo 10,000, zvino ndizvo zvakaenzana neipi imwe. Saka iwe uri kutengesa imwe pipu nepfungwa.
Nzvimbo dzakawanda dzekutengesa mapurisa dzichangoerekana dzichiverenga pivot mapeji ezuva nezuva, nevatengesi vekushandisa vanogona kuverenga yavo chaiyo pivot points; chinangwa chezuva nezuva, kushorwa uye nheyo dzekutsigira. Iwe unongopinza mazuva ekutanga, yakaderera uye iyo yekuvhara mutengo wekuchengetedzwa kumwe. The calculator ichabva yanyatsotarisa pfungwa dzakasiyana-siyana dzepivot. Iyi nheyo dzinokosha idzi dzinokosha apo vatengesi vakawanda vanozviisa ivo pachavo, zvichida maererano ne: kupinda, kumira uye kutora purogiramu yemiganhu.
Imwe chidzidzo chinokosha kune vane ruzivo, kana vatengesi vevacheche, iyi yekugadzirisa inokosha yekugadzirisa njodzi yako yekutengeserana uye kutarisa kuonekwa kwako kwose mumusika.
muenzaniso: Zvakare zvakare kushandisa EUR yedu yakawanda / USD currency pair. Iwe unoda kungoisa pangozi 1% yeakaunti yako yega yekutengeserana. Iwe unoda kuti iwe usiye chete 25 pips kure nemutengo wezvino. Iwe une uwandu hwekambani ye $ 50,000, saka iwe uchange uri kushandisa hukuru hwemamiriro maviri ejenya. Zvechokwadi iwe uri kuisa $ 500 pangozi, unofanira kukanganisa kwako kushandiswa kushandiswa izvi zvichave kurasikirwa kwako.
Zvichida zviri nyore uye pasina mubvunzo zvakanyanya kuzivikanwa kwezvigadzirwa zvedu zvekutengeserana, shanduko yemari inobvumira vatengesi kuti vashandure mari yavo yepamba mune imwe mari.
muenzaniso: Kana iwe uchida kuchinja € 10,000 kusvika ku $ 10,000 chigumisiro chiri 10,437.21USD. Pamusoro pekuti 1 EUR = 1.04372 USD uye 1 USD = 0.958111 EUR.
Izvi zvinotaridzika zvinowanikwa kuburikidza nevatengesi vedu vevatengesi veFXCC.